Jasiiradda Yas ee Etihad Arena ayaa ku soo dhaweynaysa xiddiga Bollywoodka Arijit Singh
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Entertainment » Jasiiradda Yas ee Etihad Arena ayaa ku soo dhaweynaysa xiddiga Bollywoodka Arijit Singh
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Entertainment • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Hindiya • Wararka Raaxada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Shopping • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta • Wararka kala duwan
Fanaanka ugu caansan Bollywoodka muuqaalka Jasiirada Yas ayaa noqon doonta riwaayadiisii ​​ugu horeysay ee uu ku qabto caasimada Imaaraadka muddo shan sano ah.
Fannaanka ugu caansan Bollywood -ka, Arijit Singh, ayaa ku soo bandhigi doona Etihad Arena 19 -ka November 2021 -ka.
Kani wuxuu noqon doonaa riwaayaddii ugu horreysay ee Singh uu ka sameeyo UAE muddo 5 sano ah.
Tallaabooyin caafimaad iyo badbaado oo adag ayaa lagu hayn doonaa goobta oo dhan.
Jasiiradda Yas Abu Dhabi, oo ah mid ka mid ah meelaha xilliga firaaqada iyo madadaalada ee ugu horreeya adduunka, iyadoo lala kaashanayo Waaxda Dhaqanka iyo Dalxiiska - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), iyo Dhacdooyinka Maareynta Portfolio (PME), ayaa soo dhaweyn doona fannaanka ugu caansan Bollywoodka, Arijit Singh , inay ku soo bandhigto Etihad Arena 19-ka Nofeembar, 2021. Taageerayaasha xiddigga weyn ee Bollywood-ka ayaa ku jira waayo-aragnimo aan la dhaafi karin dabayaaqada sannadkan.
Mid ka mid ah fannaaniinta ugu kartida badan xilligan casriga ah, muuqaalka Singh ee Jasiiradda Yas ayaa noqon doona riwaayadiisii ​​ugu horreysay oo uu ku qabto caasimadda Imaaraadka muddo shan sano ah. Waxa uu ku soo bandhigi doonaa heesaha casriga ah Garoonka Etihad, goobta madadaalada ee ugu weyn bariga dhexe.
Iyada oo leh cod la mid ah Cinema -da Hindiga, fannaanka Bollywood -ka iyo laxamiistaha ayaa ku soo bandhigi doona dhowr ka mid ah heesahiisa caanka ah, oo ay ka mid yihiin 'Tum Hi Ho', 'Kabira', 'Ae Dil Hai Mushkil', iyo qaar kaloo badan, oo ay ku jiraan fannaaniin caalami ah isaga oo ku soo biiraya masraxa.
“Ujeeddadayadu sannadkan waa inaan si ammaan ah dib ugu soo celinno caasimadda Imaaraadka Carabta dhacdooyin iyo riwaayado aad u xiiso badan si dadka deggan iyo booqdayaashu ugu raaxaystaan, waana ku faraxsanahay inaan qaban -qaabinno dhacdadan gaarka ah,” ayuu yiri Mudane Cali Xasan Al Shaiba, Agaasimaha Fulinta Dalxiiska iyo Suuqgeynta ee DCT Abu Dhabi. "Arijit Singh waa farshaxan aad u fiican oo had iyo jeer ku soo jiita dhagaystayaashiisa waxqabadkiisa, taas oo ka dhigaysa xulasho weyn oo riwaayad ka dhacda Etihad Arena ee Jasiiradda Yas. Taageerayaasha ka soo qeybgalaya ayaa sidoo kale ku raaxeysan kara taxanaha firfircoonida iyo dalabyada laga heli karo Jasiiradda Yas, iyagoo siinaya khibradaha madadaalada ugu dambeeya inta lagu guda jiro dabaaldegga, iyadoo la hubinayo amniga shaqaalaha, dadka deggan iyo booqdayaasha ayaa ah mudnaanta koowaad. ”
Tallaabooyin caafimaad iyo badbaado oo adag ayaa lagu hayn doonaa goobta oo dhan, si waafaqsan dhammaan tilmaamaha dawladda ee hadda jira. Intaa waxaa sii dheer, fadhiga fadhiga ayaa loo abuuray qoyska iyo saaxiibbada si ay si ammaan ah ugu raaxaystaan ​​riwaayadda iyada oo ay bulshada ka fogeyneyso kooxaha kale ee ka soo qeybgalaya. Awoodda fadhiga ee Etihad Arena waa la dhimi doonaa iyada oo qaab -dhismeedka fadhiga cawsku uu yaallo. Sida taxaddar dheeraad ah, daboolidda wejiga ayaa khasab ku ah dhammaan martida marka laga reebo marka ay wax ku cunayaan ama ku cabbayaan kuraastooda, sida ku cad tilmaamaha dowladda. Martida ka socota 12-16 sano waxay u baahan doonaan baaritaan PCR diidmo ah oo ansax ah oo leh ansax 48-saac ah. Martida da'doodu tahay 16 sano iyo wixii ka sareeya waa in si buuxda loo tallaalo oo ay ku soo bandhigaan heerka "E" ama "*" ee ku jira barnaamijka Al Hosn iyo baaritaanka PCR-ga ee xun oo leh ansax 48-saac ah.